‘साउनमा संक्रमित ३९ हजार नाघ्छन्, जोखिम बढेका ठाउँमा कडा लकडाउन हुन्छ’ – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /रोचक/‘साउनमा संक्रमित ३९ हजार नाघ्छन्, जोखिम बढेका ठाउँमा कडा लकडाउन हुन्छ’
शुरुमा बढीमा ५ हजार संक्रमित होलान् भन्ने अनुमान गरेर थालिएको तयारी अब पर्याप्त नभएको उनले स्वीकार गरे । अब कम्तिमा ४० हजार संक्रमित पुग्छन् भन्ने आकलनका साथ व्यवस्थापनमा लागिएको उनले बताए ।सीसीएमसीका सदस्यसमेत रहेका मन्त्री ढकालले खुकुलो पारिएको लकडाउनको २१ दिनको अनुभव समीक्षापछि मात्रै सार्वजनिक यातायात विस्तारै खुलाउने र संक्रमण देखिएका ठाउँहरुमा अझ कडा लकडाउने गर्ने बताए ।
प्रस्तुत छ, स्वास्थ्यमन्त्री ढकालसँग कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारले गरिरहेको प्रयासबारे अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएर कार्यालयचाहिँ खोल्ने, तर त्यहाँ जाने सेवाग्राहीका लागि सार्वजनिक यातायात नखोल्ने कुराले अप्ठेरो पर्‍यो भनिँदैछ, सार्वजनिक यातायात खोल्नेबारे सरकारको योजना के छ ?
यसमा दुईटा कुरा छ । हामीले पहिले लामो समय कडा लकडाउन गर्‍यौं । जनताले कष्ठ सहेर पनि पालना गर्नुभयो । पछिल्लो दिनमा दैनिक जीवनमा असर पारेको भनेपछि अलि सहजीकरण गरेका हौं । भ्यालीभित्र आउन नपाउने, संक्रमण भएका जिल्लाबाट अर्कोमा जाने कुरालाई रोक्ने पनि भन्यौं । दैनिक जीवनचाहिँ सहजीकरण गरौं भनेर गरिएको हो । तर, मान्छेहरुमा कस्तोखालको मनोविज्ञान भयो भने हिजो लकडाउनमा निसास्सिएको जस्तो भयो । तर, आज मान्छेको हाउभाउ र गतिविधि हेर्ने हो भने भने अब पनि नेपालमा कोरोना छ र ? लकडाउनको कुनै प्रत्याभूति छ र ? भन्नेखालको देखिन्छ ।
लकडाउनको मोडालिटीमा कतिपय अवस्थामा कडा पनि गर्ने र केही सामाजिक दूरी कामय गर्ने, स्वास्थ्यमा ध्यान दिने, हाम्रा जीवनशैलीमा कोरोनाबाट जोगिने सावधानी अपनाउने कुराचाहिँ जनतामै बढी केन्दि्रत छ । कुरा गर्ने, तर व्यवहारमा नहुने कुराले हामी नै जोखिममा पर्छौं भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
त्यसोभए अहिले नै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदैनन् ?अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा समीक्षा हुन्छ । हामीले २१ दिनको अवधि तोकेर समीक्षा गर्ने भनेका छौं । अहिलेको खुकुलोपनको बारेमा हामी हेरिरहेका छौं । संक्रमित बढेका ठाउँमा हिजोको भन्दा कडा लकडाउन हुन्छ ।
कोभिड-१९ विरुद्धको नेपालको लडाइ अब कुन चरणमा पुगेको हो ?दश हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरु संक्रमित भइसक्नुभएको छ । २५ जनाको निधन भइसकेको छ । हामीले मंगलवारसम्मै झण्डै एक लाख ८५ हजारजति पिसीआर परीक्षण नै गरिसकेका छौं । यो संख्या विहीबारसम्म बढिसकेको छ । परीक्षणको दायरालाई पनि हामीले बढाइराखेका छौं ।
आइसोलेसनमा राख्दा एउटा व्यक्तिलाई कति खर्च गर्ने, अस्पतालमा कति गर्ने ? क्रिटिकल केयर गर्नुपर्‍यो भने कति गर्ने ? त्यसो गर्दा एउटा एकरुपता एउटा मापदण्डमा आउन सक्छ भन्ने पनि छ ।
स्वास्थ्य संकटकालको बारेमा छलफल भएको हो । तर, बाहिर मिडियामा चाहिँ एक स्टेप अगाडि गएर मन्त्रालयले संकटकालकै प्रस्ताव बनाएर मन्त्रिपरिषदमै लगिसक्यो भनेर आयो । हामीले आजको मितिसम्म त्यस्तो प्रस्त्ााव मन्त्रिपरिषदमा लगेका छैनौं ।
पीसीआर टेस्टकै कुरा गर्ने हो भने पनि भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, जापानभन्दा माथि हामी धेरै माथि छौं । तर, गरेको कुरालाई उडाउने र मरेपछि पीसीआर ? भनेर प्रश्न गरिरहेका पनि देखियो । मरेपछि पनि पीसीआर गर्नुपर्छ । किनभने, यदि कोही मान्छे कोरोना लागेर मरेको रहेछ भने, त्यसको दाहसंसारको विधि फरक हुन्छ । बोकेर लैजाने मान्छे संक्रमित नहोस् भन्ने हुन्छ । मलामी पनि को-को गए भन्ने खोज्नुपर्छ । पहिले नै परीक्षण गरियो भने अरु मान्छेलाई त जोगाउन सकिन्छ नि । मरेका व्यक्तिमा कोरोना देखिएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले अरु जुन रोग भए पनि कोरोना पोजेटिभ देखियो भने त्यही कारणले मरेको भन्छ । हामीले पनि विश्व मान्यतालाई स्वीकार गरेका छौं ।
कतिपय जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले भनिरहेका छन् कि हाम्रो पूर्वतयारी नभएका कारण हृवात्तै संख्या बढ्यो र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा त्यो क्षमता पनि देखिएन, कहीँ न कहीँ त समस्या छ नि होइन ?
कोरोना देखिन थाल्यो, हामी लकडाउनमा गयौं । किन अन्त जति छिटोछिटो फैलिएन नि भनेर तिनै व्यक्तिहरु चिन्ता गर्न थाले । संक्रमण फैलिने क्रम पनि एक-दुईबाट आज हामी १० हजारमा पुग्यौं । नेपालीहरुमा किन यो कोरोनाले मान्छे मार्नचाहिँ सकेन, अन्त यति हुँदा त धेरै मान्छे मर्थे नि भनेर तिनै मान्छेले जिज्ञासा राखिरहे ।
अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै हामीले अस्ति ७ हजार ४ सयसम्मको पीसीआर रिपोर्ट नै एक दिनको दिने ठाउँमा हाम्रो क्षमतालाई बिस्तार गर्‍यौं । सातवटै प्रदेशमा ल्याब छन् । त्यसलाई अझ विस्तार गर्न लागिरहेका छौं । तयारी नभएको भए यी २२ वटा पीसीआर ल्याबचाहिँ के महामारीले आफैं बोकेर ल्याएर स्थापित गरिदिएको हो र ? तर, पनि आलोचना गर्नेलाई त हामी सम्मान नै गर्छौं ।